Beginners များအတွက်အပ်ချုပ် - အဘယ်သို့ငါကနဦးချုပ်နိုင်ပြီးဘယ်လိုငါ start ပါဘူး
Beginners များအတွက်အပ်ချုပ် | လူ့လက် DIY
ကောင်းသောပြုပြင်အားထုတ်ကောင်းသော tool ကိုမှာအပ်ချုပ်
ကောင်းသော tool ကိုမပါဘဲကောင်းသောအရာမအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဆွဲပြီးချုပ်ပေးရတယ်တဲ့အခါမှာအဆုံးရလဒ်အမြင်အာရုံစုံလင်သောကြည့်နိုင်အောင်သင်အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောအလွန်အရေးကြီးပေသည်။ စိတ်ကူးများနှင့်ပုံစံများကိုအဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်မှုရှိလျှင်, သူကအနည်းငယ်အရာနှင့်ချက်ချင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူသည်အရင်ကဆိုရင်အပ်ချုပ်သောသူမူကားကြိုးမဝယ်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အများစုကကအထည်ချုပ်အလုပ်သမတွေတော့နှင့်အထည်ချုပ်အလုပ်သမတွေတော့အကောင်းတစ်ဝါဂွမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကထည်နှင့်ချည်ရဲ့ပစ္စည်းပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။
အရင်ကဆိုရင်အပ်ချုပ်အဘို့အညာဘက် tool ကို
ကြိုးမဆိုအခြေအနေများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်အခါ။ တစ်ဦးကအလွန်မြင့်မားဆန့အစှမျးသတ်တိအရေးကြီးသောဆွဲပြီးချုပ်ပေးရတယ်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှုကာလအတွင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှထိုအပ်ချုပ်စက်အတွက်အဆက်မပြတ်ကိုက်ချည်ထက်ပိုပြီးနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နှင့်ပြန်ပေါင်းလိုက်သောခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဤအချိန်ကုန်ကျပေမယ့်လည်းဦးနှောက်အာရုံကြောများနှင့်မကြာခဏအပ်ချုပ်များ၏အပျြောအပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်သာ။ တစ်ဦးကဒါခေါ်ချုပ်-အားလုံးအရင်ကဆိုရင်အဘို့မဟုတ်မှသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏ polyester ၏ဖန်ဆင်းထားသည်အပေါင်းတို့နှင့်တ္ထုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Reihgarn ယာယီချုပ်ရိုးများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောချုပ်ရိုးသတ်မှတ်တစ်ချိန်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူသော rips ။
ပင်ကတ်ကြေးလူတိုင်းအတွက်, အပ်ချုပ်အရင်ကဆိုရင်ဆဲနေသောမဟုတ်ပဲသူတို့နှင့်အတူ, သင့်အကောင်းတစ်ဦးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ တကယ်သာပစ္စည်းများဖြတ်တောက်အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးကသင့်လျော်ချုပ်ကတ်ကြေးတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတွေညှပ်ရှည်ဓါးသွားရှိပါတယ်မကြာခဏမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်အလွဲသုံးစားမပြုလျှင်မူကား, တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားသက်တမ်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သာထည် - စက္ကူသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများသူမ၏ဖြတ်ဖို့သွားကြသည်မဟုတ်။
ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်, အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးခဲ့ရမည်။ အားလုံးပစ္စည်းများ, အားလုံးအရောင်များ - လွင်ပြင်နှင့်ရောင်စုံအဖြစ်အားလုံးစျေးနှုန်းများ။ တစ်ဦးအထူးစျေးကွက်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်မဖြစ်မနေမရရှေးခယျြရမညျ။ အင်တာနက်ကိုတွင်အလွန်ကောင်းသောလျှော့စျေးများကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏအစပြုဘို့ထည်အခြေအနေမျိုးတစ်သေတ္တာရယူဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတစ်အစပြုသူနှင့်အတူတစ်ချိန်ကကြိုးစားလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းချုပ်ရိုးကောင်းစွာထိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ကပိုကြီးတဲ့စီမံကိန်းကိုကြိုးပမ်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဖြတ်တောက်ခြင်းဖျာသေချာပေါက်အဖြစ်စံလာပေမယ့်ရှုထောင့်မှထွက်ဖြစ်ကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ, လွန်စွာကူညီပေးသည်မထားဘူး။ သင်တစ်ဦး rotary ရှုးအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, သင်မြေပြင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ဒီစွန့်လွှတ်သင့်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ကျယ်လာပြီးခံရဖို့ဖြစ်လာမယ့်ချုပ်ရိုးညာဘက်သို့မဟုတ်လွန်းတင်းကျပ်စွာအဝတ်အစားချုပ်သည်မဟုတ်လျှင်မူကားတစ်ဦးချုပ်ရဲ့တိုင်းတာတိပ်အရေးကြီးသောဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အကြီးအကဲများနှင့်အတူတံသင်အများကြီးအမျိုးမျိုးအရွယ်အစားနှင့်အထူအတွက်အပ်ချုပ်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်နှင့်ချုပ်ရိုး ripper လိမ့်မယ်။
မကြာခဏသူကိုအပ်ချုပ်အားဖြင့်သူ့လူနေမှုဝင်ငွေပါဘူး, ဒါပေမယ့်အပ်ချုပ်အတွေးအခေါ်များကင်းမဲ့သောချည်မျှင်နှင့်ဆေးထိုးအပ်, ပိုပြီးမကြာခဏဝါသနာထက်ရှိပါတယ်။
အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်ပါကဖြစ်သင့်လက်တွေ့ကျတဲ့။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အဘယ်အရာကိုချုပ်? သင်မြို့မှတဆင့်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်သည့်အခါလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အပ်ချုပ်စိတ်ကူးများအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်မကြာခဏတွေးလာရှိရာအမှုအရာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကတည်းက "ငါလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ " Rummage အားဖြင့်တဦးတည်းလညျးမိမိဗီရို, သင်မကြာခဏမိမိတို့၏နေ့ကရှိခဲ့ဘူးသောအဝတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်လွန်းအဖိုးတန်အဝေးပေးခြင်းနေကြသည်။
အဟောင်းဂျင်းဘောင်းဘီ, ဥပမာ, များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး chic အိတ် repurpose အတူအထက်ပိုင်း, ဒါဇစ်ပြန်အိတ်ကပ်နှင့်အတူခါး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဂျင်းဘောင်းဘီ၏ခြေထောက်တစ်ဦးလည်ပင်းအလိပ်သို့မဟုတ်သေးငယ်အိတ်များအတွက်အခြေခံအားဖြင့်နီးပါးအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ လှပသော applications များနှင့်အတူမေတ္တာနဲ့လက်ဆောင်တွေပေါ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဘောက်ချာ်အသေးစားအိတ် - လူအတော်များများအပ်ချုပ်စိတ်ကူးများတစ်ဦးအဖြစ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အပ်ချုပ်နှင့်အတူဆကျဆံသောမိသားစုတွင်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုအကြားတစ်စုံတစ်ဦးရှိ၏။ ဤရွေ့ကားမကြာခဏအများအပြားပုံစံများရှိသည်နှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့ကိစ္စရပ်များသို့တွေအများကြီးစုတ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ အမြိုးသားအဘို့ Brustbeutel ပေါ်ထွန်းသို့မဟုတ် chic နှင့်ဖက်ရှင်ဦးထုပ်လိမ့်မည်။ ပုံစံများသည်လည်းနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုရယူနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်များအတွက်စျေးကွက်အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထူထောင်ခဲ့ကြသောမဂ္ဂဇင်းကုန်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြဿနာတစ်ခုပုံစံပါရှိသည်။ သငျသညျ, ဥပမာ, အဆင်းလှသောအင်္ကျီချုပ်ဖို့ချင်လျှင်, သင်ထိုကဲ့သို့သောပုံစံကိုရှာခြင်းနှင့်စတင်ရန်။
အထည်စတိုးဆိုင်တွင် - ပေမယ့်ဒီကအရမ်းရှားပါးများမှာ - တ္ထုများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်, အခြားအပ်ချုပ်စိတ်ကူးများဆောင်ခဲ့ရမည်။ ရောင်းသူနှင့်အတူစကားလက်ဆုံသို့မဟုတ်တစ်ကအထည်ချုပ်အလုပ်သမတွေတော့အသစ်ကအပ်ချုပ်စိတ်ကူးများတတ်၏။
ဥပမာအားဖြင့်သေးငယ်သည့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူသောရေချိုးကန်ထဲမှာယူနိုင်ပါသည်မည်သို့အကြောင်းကို, toweling ။ အဆိုပါကလေးများယုံကြည်မှုနှင့်အတူမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းငွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရေမြှုပ်နှင့်အတူဖြည့်ပါနဲ့အခြောက်တစ်ရေတိုင်ကီပေါ်ရေချိုးပြီးနောက်ထည့်သွင်း။
များစွာသောNähideen။ တိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်စိတ်ဝင်စား, သငျသညျရိုးရိုးဘလော့ဂ်အတွက်စကားပြောဆိုမှုအထဲသို့ဝင်သော, မကြာခဏပုံစံများပင် e-mail, မှတဆင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်သည့်ဧည့်သည်များကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေကြသည်။
တဦးတည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိသည်ဟုမဟုတ်ကြောင်းအပ်ချုပ်အတွေးအခေါ်များမှလျင်မြန်စွာသငျသညျဒါ။ ပိုမိုခေတ်မီတစ်ခုခုလိုခငျြသူမြားသညျ, သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသွားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပုံစံများကိုဥပမာကော့တေးဆင်မြန်းသို့မဟုတ် pantsuits နှင့်ဝတ်စုံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပဲကြည့်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ကြ - အပ်ချုပ်စိတ်ကူးများအမြဲနှင့်နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
အရင်ကဆိုရင်အဘို့အဇာထိုးပန်းထိုး | DIY လက်မှုပညာ
အပ်ချုပ် - အဘယျသို့ပစ္စည်းများငါကိုအသုံးပြု
ဖယောင်းတိုင်လောင်း | DIY
ထွန်း - ခရစ်စမတ် DIY
ကလေးကို Socks ဇာထိုးပန်းထိုး - DIY
ကလေးလက်အိတ်ဇာထိုးပန်းထိုး - DIY
ကလေးဦးထုပ်ဇာထိုးပန်းထိုး - DIY